कोरोनाले खोस्यो पाँच वरिष्ठ चिकित्सक – साँचो खबर
काठमाडौं : कोरोना संक्रमणका कारण नेपालमा हालसम्म पाँचजना वरिष्ठ चिकित्सकले ज्यान गुमाएका छन्। पछिल्लोपटक गत शनिबार काठमाडौंको ओम अस्पतालका वरिष्ठ जनरल ७८ वर्षीय र्सजन डा. धु्रब मुडभरीको निधन भएको थियो। उपचारका क्रममा शनिबार साँझ निधन भएको मुडवरी ओम अस्पतालका पूर्व संस्थापक भएको डा. भोला रिजालले जानकारी दिए। अस्पतालका अनुसार मुडभरीमा ९ दिनअघि कोरोना पुष्टि भएसँगै ओम अस्पतालमै उपचाररत थिए। उपचारको पाँचौं दिन खोपको मात्रा पुरा भएपछि डिस्चार्ज भएर घर गएकै भोलिपल्ट बेहोस भएपछि फेरि उनलाई ओम अस्पतालमै लगेर उपचार गरिएको थियो। दोस्रोपटक भर्ना गरेको तीन दिनमै उनको मृत्यु भएको हो।
Previous: बाइडेनले ल्याए जोन केरीलाई जलवायु परिवर्तन विभाग प्रमुखमा, जानेट एलेनलाई अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी
Next: काेराेनाकाे खाेप किन्ने कानुनी बाटाे खुल्याे, भण्डारण समस्या